IPopcru yamukele ukuboshwa kwabasolwa ngokuhlasela amaphoyisa eNgcobo | News24
IPopcru yamukele ukuboshwa kwabasolwa ngokuhlasela amaphoyisa eNgcobo
Johannesburg - Inyunyana yamaphoyisa iPolice and Prisons Civil Rights Union (Popcru), yamukele ukuboshwa kwabasolwa abangu-10 ngokubandakanyela esigamekweni sokubulawa kwamaphoyisa amahlanu abengamalungu ePopocru nesosha eselathatha umhlalaphansi eNgcobo e-Eastern Cape.
Le nyunyana ngeSonto yamukele ukutholakala kwezibhamu ezebiwa ngosuku lwesigameko sokubulawa ngesihluku kwamaphoyisa esiteshini samaphoyisa eNgcobo.
Kudutshulwe kwabulawa abasolwa abangu-7 ngesikhathi amaphoyisa egasele esontweni iSeven Angels Ministry ngoLwesihlanu ebusuku. Leli sonto beligcine abasolwa ababandakanyeka esigamekweni sokudubula esiteshini samaphoyisa.
"Siyakwamukela ukusukunyelwa kwalesi sigameko ngokushesha, ukuboshwa kwabanye abasolwa nokutholakala kwezibhamu ezebiwa esiteshini," kusho uRichard Mamabolo, okhululema iPopcru esitatimendeni.
IPopcru ibonge umphakathi waseNgcobo ngendima eyidlalile kuboshwa abasolwa.
Amaphoyisa adutshulwa abulawa kulesi sigameko nguWarrant Officer Zuko Mbini, 45, iConstables Zuko Ntsheku, 38, iNkosiphendule Pongco, 32, iSibongiseni Sondlana, 32 noKuhle Metete, 27, kanye nesosha eselathatha umhlalaphansi uMbuyizeni Freddy Mbandeni.
Kubikwa ukuthi leli sonto lizohlala livaliwe kuze kuphothulwe uphenyo kanti abazalwane bakuleli bandla bathi bebengazi ukuthi abaholi babo bayizigebengu.
Khonamanjalo i-African National Congress (ANC) National Executive Committee (NEC) idlulise amazwi enduduzo emndenini yamaphoyisa ashona kuhlaselwa esioteshini samaphoyisa.
UKhongolose uncome amaphoyisa ngokuboshwa kwamasolwa wacela nokuthi umphakathi usebenzisane namaphoyisa ukuze isimo sizobuyela esimeni nsaso endaweni.
Abasolwa bavele namuhla eNkanntolo yeMantshi yaseNgcobo.
Kulindeleke ukuba kuvele abasolwa abangu-13 enkantolo, abangu-10 baboshwa amaphoyisa kuthi abathathu bazinikela emaphoyiseni.